Amacebo ama-7 Wokwengeza Ukuthengisa Kwakho Ngeholide | Martech Zone
Amacebo ama-7 Wokwengeza Ukuthengisa Kwakho Ngeholide
Sihlinzeke ngethani lemininingwane ekuqaleni kwanamuhla Ukuthengiswa Kweholide kanye nezinsuku ezihambisanayo, izibikezelo nezibalo, manje sifuna ukwabelana nge-infographic yokuthi ungazisebenzisa kanjani lezo zindlela ukukwengeza ukuguqulwa okuku-inthanethi ngesikhathi samaholide.
Yiso leso sikhathi sonyaka futhi! Umdlandla wokuthenga ngamaholide usuzoqala. ShortStack uqoqe inqwaba yezibalo (25!) mayelana nezitayela zokuthenga, futhi ungeze nemibono embalwa yemikhankaso ezokusiza ukuxhumana nabalandeli bakho nabalandeli abaningi emasontweni ambalwa ezayo.
Kusenesikhathi esiningi sokuthola izipho emnyango ngakho manje yisikhathi sokunikela ngomkhankaso ukuthumela kwamahhala!
Ufuna ukusindisa izindleko zokuthumela? Kuthiwani ngokunikela ngesaphulelo kumakhasimende afuna ukwenza njalo Phakamisa ukuthenga kwabo esitolo sakho?
Nikeza iphromoshini ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana eheha umphakathi wakho bhalisa nge-imeyili ukuze ukwazi ukuphusha okunikezwayo isizini yonke.
Manje njengoba usunalawo ma-imeyili, hlela i nikeza usuku sonke isikhathi samaholide.
Thatha ithuba ababonisa umbukiso futhi unikeze umnikelo weselula kuphela ukugcina ukuthengwa esitolo sakho!
Uma ukhuluma ngeselula, qiniseka ukusebenzisa amakhuphoni alungele iselula. Amakilabhu okuthumela imiyalezo aseyindlela enhle yokuphusha izaphulelo kumakhasimende akho, qala eyodwa futhi unikeze amakhuphoni kuwo wonke amaholide.
Sebenzisa isizini yokuthenga bese uqala isikhathi eside amaswidi kwababhalisile bakho be-imeyili ukuze bahlale bebhalisile futhi basebenze kuma-imeyili okunikezwayo owathumelayo.
Tags: izaphuleloukuthumela kwamahhalaukuthengiswa kwamaholideukuyothenga amaholidengcono ukuthengisaukwandisa ukuthengisaisigqebhezana seselulaumnikelo weselulanikeza usukuukuthengwa kwe-inthanethithatha izaphuleloukubukisaamaswidi
Izinsuku Eziyinhloko Nezibalo Okufanele Uzazi Ngokuya Esikhathini Seholide Sika-2014
IMintigo: Ukubikezela Ukuhola Okubikezelayo Kwebhizinisi